တရုတ်နိုင်ငံမှရက် လုပ်၍ မရသောအိတ် / ရက်မပါသောစျေးဝယ်အိတ် / ချစ်စရာကောင်းသောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအိတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ Zhihongda
အလွှာမရှိသောအိတ် / ရက်မ ၀ ယ်နိုင်သောစျေးဝယ်အိတ် / ချစ်စရာကောင်းသောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအိတ်
ရက်များမဟုတ်သောအိတ်များသည်ယက်မဟုတ်သော polypropylene (PP) ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအိတ်များဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်း။ ချောမွေ့လွယ်ကူပြီးစုပ်ယူနိုင်သည့် polypropylene ဖိုင်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ဤပစ္စည်းသည်ယက်မဟုတ်သောအိတ်များကိုကြာရှည်ခံ။ ဆွဲဆောင်မှု ရှိ၍ အသက်ရှူနိုင်သော၊ ပြန်သုံးနိုင်သော၊ ရေခံနိုင်မှု၊ hypoallergenic၊ မီးခံနိုင်၊ ပျော့ပျောင်းသော၊ ဒီအိတ်များအတွက်ပစ္စည်း5နှစ်အထိကြာရှည်ရန်လုံလောက်ခိုင်မာသည်။
1. ရက်မထားသောအိတ်များသည်ယက်လုပ်ခြင်းမရှိသော polypropylene (PP) ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်သောအိတ်များဖြစ်သည်။ ပျော့ပျောင်း။ ချောမွေ့လွယ်ကူပြီးစုပ်ယူနိုင်သည့် polypropylene ဖိုင်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
2. ဤပစ္စည်းသည်ယက်မဟုတ်သောအိတ်များကိုကြာရှည်ခံ၊ ဆွဲဆောင်မှု ရှိ၍ အသက်ရှူနိုင်သော၊ ပြန်သုံးနိုင်သော၊ ရေခံနိုင်မှု၊ hypoallergenic၊ မီးခံနိုင်ခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းသော၊ ဒီအိတ်များအတွက်ပစ္စည်း5နှစ်အထိကြာရှည်ရန်လုံလောက်ခိုင်မာသည်။
ရှေ့သို့ ပုံနှိပ်ထားသောပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစျေးဝယ်အိတ်၊ ပန်းရောင်ဈေးဝယ်ခေါက် Tote PP လိုင်တင်မဟုတ်သောအိတ်
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက်လိုဂိုပုံနှိပ်ခြင်းစူပါမားကတ် eco ပြန်သုံးနိုင်သောအစိမ်းရောင်စျေး ၀ ယ်ခြင်း tote Non ရက်လုပ်အိတ်
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောလက်ကိုင်ကုန်စုံ Tote မဟုတ်သော ...
တရုတ်အလွှာကခေါက်သိမ်းနိုင်သောအဝါနုရောင်အ ၀ တ်အစားဆိုင် ...
Eco Friendly ကုန်ပစ္စည်းလက်ကားပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော Custo ...